Sarimihetsika Indoneziana Miresaka Ny Fomba Amin’ny Fampakarambady Bugis Amin’ny Fanomezana “Dot” (Fanomezana Ampanarahana Ny Tovovavy Mivoaka Hanambady) · Global Voices teny Malagasy
Sarimihetsika Indoneziana Miresaka Ny Fomba Amin'ny Fampakarambady Bugis Amin'ny Fanomezana “Dot” (Fanomezana Ampanarahana Ny Tovovavy Mivoaka Hanambady)
Voadika ny 22 Septambra 2016 13:12 GMT
Karazana Fampakarambady Bugis any Mandar. Sary avy amin'i Buregsandeq, Wikipédia
Horonantsary Indoneziana iray no niteraka adihevitra tamin'ny vahoaka momba ny fomba amam-panao tsy misy toa azy amin'ny fampakarambady ao amin'ny foko Bugis any amin'ny nosy Sulawesi izay anomezan'ny mpampakatra Uang Panai’ na vodiondry hoan'ny fianakavian'ny ampakarina alohan'ny fanambadiana.
Miankina amin'ny lafin-javatra maro ny habetsahan'ny Uang Panai’ toy ny faripahaizana sy ny toerana ara-tsosialy misy ilay ampakarina. Raha nanoratra momba ny Uang Panai’ i Graham Davies, manampahaizana mpikaroka, dia nanamarika fa “misy fitsipika sarotra napetraka mba hifehezana ny fandoavana ny sandan'ilay tovovavy ampakarina”.
Raha tsy misy ny Uang Panai’, tsy tanteraka ny fampakarambady. Vokatr'ity fomba ity, matetika ireo vehivavy Bugis no antsoina hoe ‘ny vehivavy raitra indrindra any Indonezia’.
Hazavain‘ny Blaogera, Nani Rachman, ny fanolorantenan'ny mpampakatra amin'ilay ho vadiny amin'ny alalan'ny Uang Panai':
Raha tanteraky ny mpampakatra ny sanda ilaina (Uang Panai’), dia hanome voninahitra ny fianakavian'ilay vehivavy izany. Ny voninahitra eto dia midika ho toy ny fankasitrahana atolotry ny mpampakatra ho an'ilay vehivavy tiany ho vadiana amin'ny alalan'ny fanaovana fety makotrokotroka avy amin'ny Uang Panai’.
Mpitoraka bilaogy hafa, Indra Mae, nanamafy fa ny Uang Panai’ dia tena tsy mitovy amin'ny fandraisan'ny tandrefana ny “Dot” (fanomezana ampanarahana ny tovovavy mivoaka hanambady) :
Izy io dia vola omen'ny mpampakatra ilay tovovavy ampakariny, izay toy ny endrika fankasitrahana sy fanajana ny fitsipika sy ny zava-misy ary ny rafi-piarahamonina. Tsy raisina ho toy ny ‘dot’ ny Uang Panai’ fa toy ny vola fanome ara-pomba, masombola ifanarahan'ny roa tonta na ny fianakaviana
Ao amin'ilay horonantsary Uang Panai’, mitaraina ny rain'ny mpampakatra fa lasa olana ara-tsosialy ny fanomezana ilay “Dot”.
Ny horonantsary dia mitantara mpitambokin'ny mpivarotra iray izay mandray 5 tapitrisa Rupiahs (379 dolara amerikana) isambolana fa mila mahaangona 120 tapitrisa Rupiahs ‘9.000 dolara amerikana) hatao “Dot” hoan'ny fianakavian'ilay tovovavy tiany akarina ho vady. Nindrana vola tamin'ny mpampisambotra ny rainy hanampiana ilay tovolahy..
Nisy lahatsoratra iray momba ny miaramila izay nodarohan'ny fianakavian'ny vadiny tao amin'ny faripiadidian'ny Gowa satria tsy nahavita nanome ny sandam-bola feno ilaina amin'ny Uang Panai’. Tantara iray hafa mitatitra tovovavy avy any Bulukumba izay mitantara ny tsy nanambadian‘ny namany azy satria tsy neken'ny fianakaviandry zareo ny Uang Panai’. Vao haingana, lehilahy iray maty vady any Pinrang naseho tamin'ny pejy voalohany amin'ny gazety taorian'ny tatitra fa nanome 599 tapitrisa Rupiahs (eo ho eo amin'ny 45.000 dolara amerikana) ny tovovavy nampakariny ho vady?.
Ny horonantsary Uang Panai’ dia niteraka fanehoankevitra mifamahofaho mikasika ny fomba amam-panao amin'ny fampakarambady. Misy mino fa miteraka aingam-panahy ho an'ny mpampakatra mba hanaporofo ny fitiavany an'ilay tovovavy ampakariny ho vady izy io, raha ny hafa kosa mandà izany ary mandika azy ho enta-mavesatra tsy ara-drariny. Nefa misy koa ireo mpahita izay manizingizina fa ny Uang Panai’ dia mihoatra noho ny “Dot” na vola ilaina mba hanambadiana ny vehivavy Bugis. Ambaran'izy ireo fa famehezantena sy fanolorantena avy amin'ny mpampakatra izany..
Sambany ny hoe horonantsary mahazatra any Indonezia no nifantoka tamin'ny Uang Panai’, fomba amam-panao amin'ny fampakarambady.
Mbola be mpampihatra tokoa ny fanomezana ny Uang Panai’ amin'izao vaninandro izao ao amin'ny foko teratany Bugis Makassar.